TV ကြည့်ကောင်းနေရင် တခြားဘာကိုမှမမြင်တော့တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်ကြောင့် ဆွံ့အသွားခဲ့ရတဲ့ လင်းလင်း - Myannewsmedia
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လင်းလင်းက တေးရေးဆရာတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ “စဉ်းစားပါ” အခွေကို ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ လင်းလင်းက သူသီချင်းတွေအမြဲရေးပေးနေကျဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်မလေး ချစ်သုဝေနဲ့ ဖူးစာဆုံခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ရာ အခုဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမြွှာသမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အလှူအတန်းတွေလုပ်လိုက်၊ သမီးတွေကိုထိန်းကြောင်းလိုက်နဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးနေတဲ့ လင်းလင်းက ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း သမီးတွေပြောတဲ့စကားကြောင့် ဆွံ့အသွားခဲ့ရပါတယ်။
လင်းလင်းက TV ကြည့်နေတဲ့ သမီးလေးတွေကို အာရုံပြောင်းစေဖို့ စကားလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့် သမီးတွေရဲ့အဖြေကြောင့် ဆွံ့အသွားခဲ့ရကြောင်းကို “ကျုပ်မေး – ရဲဘော်တို့ စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ် ဆင်နွှဲမယ်။ ရှေ့ကိုအာရုံစိုက်.. ဘာမြင်ရလဲကွ ?? သမီးတွေဖြေ – peppa pig ( ပါပါးပစ် )” ဆိုပြီး သူတို့ကြည့်နေတဲ့ ကာတွန်းကိုသာအာရုံရတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်အကြောင်းကို ပြောထားပါတယ်။
လင်းလင်းကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူပီပီ သမီးတွေနဲ့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆော့ကစားပေးလေ့ရှိပြီး သမီးတွေအလိုကို အမြဲတမ်းလိုက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လင်းလင်းတို့ သားအဖသုံးယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
နိုငျငံကြျော အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ လငျးလငျးက တေးရေးဆရာတဈယောကျအဖွဈကနေ “စဉျးစားပါ” အခှကေို ထှကျရှိခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှု ရရှိခဲ့သူတဈယောကျပါ။ လငျးလငျးက သူသီခငျြးတှအေမွဲရေးပေးနကေဖြွဈတဲ့ အဆိုတျောမလေး ခဈြသုဝနေဲ့ ဖူးစာဆုံခဲ့ပွီး လကျထပျခဲ့ရာ အခုဆိုရငျ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အမွှာသမီးလေးနှဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ အလှူအတနျးတှလေုပျလိုကျ၊ သမီးတှကေိုထိနျးကွောငျးလိုကျနဲ့ အခြိနျကုနျဆုံးနတေဲ့ လငျးလငျးက ဒီတဈခေါကျမှာလညျး သမီးတှပွေောတဲ့စကားကွောငျ့ ဆှံ့အသှားခဲ့ရပါတယျ။
လငျးလငျးက TV ကွညျ့နတေဲ့ သမီးလေးတှကေို အာရုံပွောငျးစဖေို့ စကားလမျးကွောငျးခဲ့ပမေယျ့ သမီးတှရေဲ့အဖွကွေောငျ့ ဆှံ့အသှားခဲ့ရကွောငျးကို “ကြုပျမေး – ရဲဘျောတို့ စဈဆငျရေးတဈရပျ ဆငျနှဲမယျ။ ရှကေို့အာရုံစိုကျ.. ဘာမွငျရလဲကှ ?? သမီးတှဖွေေ – peppa pig ( ပါပါးပဈ )” ဆိုပွီး သူတို့ကွညျ့နတေဲ့ ကာတှနျးကိုသာအာရုံရတဲ့ ခတျေနဲ့သဈအကွောငျးကို ပွောထားပါတယျ။
လငျးလငျးကတော့ ဖခငျဖွဈသူပီပီ သမီးတှနေဲ့ ကွမျးကွမျးတမျးတမျးဆော့ကစားပေးလရှေိ့ပွီး သမီးတှအေလိုကို အမွဲတမျးလိုကျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ လငျးလငျးတို့ သားအဖသုံးယောကျရဲ့ ပုံရိပျတှကေို သဘောကကြွမယျ ထငျပါတယျနျော။
Previous post “သူမကို မလှဘူးဆိုတာထက် မချစ်ဘူးလို့ပြောမှာကို စိုးရိမ်တယ်ဆိုတဲ့ မေမီကိုကို”
Next post သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာများလို့ သဘောထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှ လူကြမ်းမင်းသားများကို အလှူငွေနဲ့ ရိက္ခာများ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ